ကြယ်တံခွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရေခဲဖုံးသော နေအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်ထည်ငယ်
ကြယ်တံခွန်ဆိုရာ၌ တစ်ခါတစ်ရံသာလျှင် မြင်ရသော မီးရှုးသဏ္ဌာန် အရောင်တန်းထွက်နေသည့်ကြယ်ကို ဆိုလိုသည်။ ကောင်းကင်တန်ဆာတို့တွင် ကြယ်တံခွန်များသည် အံ့ဩစရာ ကောင်းပေသည်။ ကြယ်တံခွန်တို့သည် ရုတ်တရက် ပေါ်လာတတ်၍၊ ရက်အနည်းငယ်သော်လည်းကောင်း ရက်ပေါင်းများစွာသော်လည်းကောင်း ကြာအောင် မြင်မြင်ထင်ထင် ရှိပြီးနောက်၊ နေမှဝေးရာသို့ ဆုတ်ခွာပျောက်ကွယ် သွားတတ်ကြသည်။ ရှေးအခါက ကြယ်တံခွန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယုံမှတ်မှုများစွာ ရှိခဲ့၏။ များသောအားဖြင့် ကြယ်တံခွန်ပေါ်လာလျှင် ကပ်ဘေးများ ဆိုက်ရောက်တတ်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။
၁ မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်ပေါ်လာ
၃ ကြယ်တံခွန်များ၏ အစိတ်အပိုင်း ၃ ပိုင်း
၃.၁ ဝတ်ဆံပိုင်း (nucleus)
၃.၂ ကိုမာ/ဦးခေါင်းပိုင်း (coma)
၃.၃ အမြီးပိုင်း (tail)
ကြယ်တံခွန်သည် မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်ပေါ်လာ၍၊ မည်သည့်အရပ်သို့ ထွက်သွားသည်ကို ယခုတိုင် ရှင်းလင်းစွာ မသိကြရသေးချေ။ ကြယ်တံခွန်ကို မှုန်မှီမှုန်မွှား သဏ္ဌာန်က စတင်၍ မြင်ရတတ်သည်။ နေဆီသို့ ချဉ်းကပ်လာသောအခါတွင်မှ ဦးခေါင်း၊ ဦးခေါင်း၏ နျူးကလီးယပ်အပိုင်းနှင့် အမြီးတို့သည် ကွဲကွဲပြားပြား ပေါ်လွင်လာသည်။ ကြယ်တံခွန်၏ ဦးခေါင်းတွင် နျူးကလီးယပ်အပိုင်းမှာ ပိုမိုထွန်းလင်း၍၊ ထိုအပိုင်းကို ကိုမားခေါ် မှုန်မွှားမွှားလင်းနေသောအပိုင်းက အိမ်ဖွဲ့ကာ ဝိုင်းရံထားသည်။
ကြယ်တံခွန်သည် အမြီးသည် နေနှင့် နီးကပ်လာမှ ပေါ်လာတတ်သည်။ ထို့ပြင် အမြီးသည် ဦးခေါင်း နောက်၌လည်း အမြဲမနေချေ။ နေဆီသို့ ကြယ်တံခွန်ချဉ်းကပ်သွားချိန်တွင် ကြယ်တံခွန်နောက်၌ အမြီးသည် ကြယ်တံခွန်၏ ဦးခေါင်းရှေ့သို့ ရောက်သွားသည်။ အခြားတစ်နည်းပြောရသော် ကြယ်တံခွန်သည် နေဖက်သို့ အမြဲဦးခိုက်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ နေ၏မျက်နှာပြင်တွင် လျှပ်စစ် 'ဓာတ်မ'ရှိ၍၊ ကြယ်တံခွန်၏ အမြီးတွင်လည်း လျှပ်စစ် 'ဓာတ်မ'ရှိသဖြင့် နေ၏'ဓာတ်မ'က ကြယ်တံခွန်အမြီး၏ 'ဓာတ်မ'ကို တွန်းခွာသောကြောင့် ဖြစ်တန်ရာသည်ဟု ဆိုသည်။ ကြယ်တံခွန်သည် နေရှိရာသို့ ပြန်လာသည်လည်း ရှိသည်။ နောက်ထပ်ပြန်မလာတော့ဘဲ တစ်ခါတည်း အစအနပျောက်သွားသည်လည်း ရှိသည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါ နက္ခတ်ဆရာအများကပင် ကြယ်တံခွန်ကို နေစကြဝဠာတွင်အပါအဝင်ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ယင်းသည် နေနှင့်ဂြိုဟ်များဖြစ်ပေါ်ရာ နက်ဗျူလာကြီး၏ ပါးသောအစွန်းအနားမှ ပေါ်ပေါက်လာဟန်ရှိသည်ဟူ၍လည်းကောင်း ယုံကြည်ယူဆလာကြလေပြီ။ ကမ္ဘာမှမြင်ရသော ကြယ်တံခွန်တို့သည် ဂြိုဟ်များ ကဲ့သို့ပင် ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းများဖြင့် နေကိုလှည့်ပတ်နေ ကြသည်။ သို့သော် ကြယ်တံခွန်၏ လမ်းကြောင်းကား ဂြိုဟ်တို့၏ ဘဲဥပုံလမ်းကြောင်းတို့ထက် များစွာပို၍ရှည်လျားသည်။ ယင်းသို့ လှည့်ပတ်နေကြယင်း ကြယ်တံခွန်သည် နေရှိရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဟု ယူဆကြရာ၊ ဤသို့ ယူဆသည့်အတိုင်းလည်း နေရှိရာသို့ အချိန်မှန် ပြန်လည့်လာသော ကြယ်တံခွန်များကို တွေ့မြင်ရပေသည်။
အခြားထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော ကြယ်တံခွန်များမှာ အင်ကီကြယ်တံခွန်၊ ဗီအဲလားကြယ်တံခွန်၊ ဒိုနားတီးကြယ်တံခွန်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အင်ကီကြယ်တံခွန်သည် ၃ နှစ်နှင့် ၆ လကြာတိုင်း ကမ္ဘာသို့ တစ်ကြိမ် ချဉ်းကပ်လာသည်။ ဗီအဲလားကြယ်တံခွန်သည် ၁၈၄၆ ခုနှစ်တွင် ၂ ခြမ်းကွဲသွားပြီးနောက်၊ အစိတ်စိတ်အမြွာမြွာ ထပ်မံ၍ ကွဲထွက်သွားပြန်သည်။ ဒိုနားတီးကြယ်တံခွန်မှာ ၁၉ ရာစုအတွင်း ပေါ်သော ကြယ်တံခွန်တို့အနက် အထွန်းလင်းဆုံး ကြယ်တံခွန် ဖြစ်၏။ ကြယ်တံခွန်သည် အရွယ်ပမာဏအားဖြင့် အလွန်အမင်း ကြီးမားကြပေသည်။ ကြယ်တံခွန်၏ ဦးခေါင်းမှာ မိုင်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀၀ အထိကျယ်ပြန့်၍၊ အမြီးမှာ မိုင်ပေါင်း အသိန်းအသန်းရှည်လျားသည်။ ကြယ်တံခွန်ဦးခေါင်း၏ နျူးကလီးယပ်အပိုင်းသည် မိုင် သုံး/လေးရာမှ မိုင် ခုနှစ်/ရှစ်ထောင်အထိ ကျယ်ပြန့်သည်။ ကြယ်တံခွန်တို့သည် အေးစက်နေသော အလင်းမဲ့ဒြဗ်ထုများဖြစ်၍၊ ယင်းတို့တွင် အစိုင်အခဲရော ဓာတ်ငွေ့များပါ ပါဝင်ကြသည်။ ကြယ်တံခွန်တို့သည် နေသို့ချဉ်းကပ်လာမှ အလင်းရောင် ထွက်လာသည်။ ထိုအလင်းရောင်သည် နေရောင်မှ ပြန်ဟပ်သော အလင်းရောင်ပြန်လော၊ သို့မဟုတ် နေပူရှိန်ကြောင့် ပူပြင်းတောက်လောင်ရာမှ ထွက်လာသော အလင်းရောင်လော ဆိုသည်ကိုမူ အတိအကျမသိရသေးပေ။ နေနှင့်ဝေးချိန်၌ ကြယ်တံခွန်တို့သည် နှေးကွေးစွာ ရွေ့လျားကြသော်လည်း နေသို့ ချဉ်းကပ်လာသောအခါ တစ်စက္ကန့်တွင် မိုင် ၃၀၀ (တစ်မိနစ်တွင် မိုင်ပေါင်း ၁၈၀၀)နှုန်း ပေါက်အောင်ပင် ကြောက်ခမန်းလိလိ လျင်မြန်လာတတ် ပေသည်။
ကြယ်တံခွန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာ ဝင်တိုက်မိတတ်ပေသည်။ ကြယ်တံခွန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာ ဝင်တိုက်မိသည့်အခါမျိုးနှင့် ကြုံကြိုက်ခဲ့ဘူးသော်လည်း၊ ကမ္ဘာ၌ မည်သို့မျှ ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ခဲ့ပေ။ ဝင်တိုက်မိမှန်းကိုပင် မသိရချေ။
ကြယ်တံခွန်တို့သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုများဖြစ်ပြီး နေကို လှည့်ပတ်လျက် ရှိသည်။ နေနှင့် နီးလာသည်နှင့်အမျှ နေရောင်ခြည်လေ (solar wind) ၏သက်ရောက်မှု့ကြောင့် တောက်ပသော အမြီးထွက်ပေါ်လာသည်။
ကြယ်တံခွန်များ၏ အစိတ်အပိုင်း ၃ ပိုင်းပြင်ဆင်
ကြယ်တံခွန်များသည် နေနှင့်နီးလာသည်နှင့်အမျှ ဝတ်ဆံအပိုင်း မှဓာတ်ငွေ့များက လေထုသဖွယ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းအပိုင်းကို ကိုမာ (coma) ဟုခေါ်သည်။ ကိုမာအပိုင်းသည် ၈၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၅၀၀၀၀) ခန့်လောက်ထိရှိတက်ပြီး ဝတ်ဆံပိုင်း(nucleus)ကို တိမ်တိုက်များသဖွယ် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ကိုမာအပိုင်းသည် နေနှင့်အနီးဆုံးအချိန်တွင် အကြီးဆုံးတွေ့မြင်ရပြီး နေနှင့်ဝေးလေ အချင်းငယ်သွားလေဖြစ်သည်။ နေနှင့် ပို၍ နီးကပ်လာသောအခါ နေ၏ဆွဲအားကြောင့် အရှိန်ပိုမြန်လာသည်။ နေရောင်ခြည်လေ (solar wind) သက်ရောက်မှု့ကြောင့် ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များသည် အမြီးအဖြစ် ပန်းထွက်လာသည်။
ကြယ်တံခွန်၏ ပတ်လမ်းသည် ဘဲဥပုံရှိသည်။ အမြီး ၂ ခုပါဝင်ပြီး အိုင်ယွန်းအမြီးသည် နေနှင့် အစဉ် ဆန်ကျင်ဘက်သို့ဦးတည်နေပြီး ဖုန်မှုန့်အမြီးကား ပတ်လမ်းကြောင်းကို လိုက်၍ကွေးလျက် ရှိသည်။
ကြယ်တံခွန်များသည် နေနှင့်နီးလာသည်နှင့်အမျှ နေရောင်ခြည်လေ (solar wind) အားသက်ရောက်မှု့ကို ပိုမိုခံလာရပြီး ကိုမာမှ ဓာတ်ငွေ့များနှင့် ဖုန်မှုန့်များ သည် နောက်တွင်အမြီးသဏ္ဌာန် တန်း၍ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကြယ်တံများ၏ အမြီးပိုင်းသည် နေနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ကို အမြဲတစေတန်းလျက် ရှိကြသည်။ နေ၏ အနီးနားသို့ ရောက်လာသည်နှင့် အမျှ နေမှထုတ်လွှင့်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များနှင့် ကြယ်တံခွန်မှ ဓာတ်ငွေ့အမှုန်များ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ကြသဖြင့် ကြယ်တံခွန်တို့၏အရောင်သည် ပို၍တောက်ပလာသည်။ အမြီးသည်လည်း ပို၍ရှည်လျားလာသည်။ ကြယ်တံခွန်တစ်လုံးတွင် အမြီး ၂ ပါရှိသည်။ ဖုန်မှုန့် အမြီး နှင့် အိုင်ယွန်းအမြီး တို့ဖြစ်သည်။
Comets Page Archived 19 February 2011 at the Wayback Machine. at NASA's Solar System Exploration
How to MakeaModel ofaComet Archived 23 February 2009 at the Wayback Machine. audio slideshow – National High Magnetic Field Laboratory
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြယ်တံခွန်&oldid=706222" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။